कुनबेला महिलालाई SEX चाहना बढी हुन्छ ? – MeroJilla.com
कुनबेला महिलालाई SEX चाहना बढी हुन्छ ?
महिलाहरूलाई पुरुष मिलनको रहर कुन बेला अधिक हुन्छ ।
सहभागीहरूलाई महिलासँग कुन समय यौनसम्बन्ध राख्दा उनीहरूलाई बढी आनन्द अनुभूति हुन्छ भन्नेबारे सोधिएको थियो । यौन विशेषज्ञहरूका अनुसार, महिनावारी पूरा भएको पाँचदेखि सात दिनसम्म यौनको ुमुडु मा बढी हुन्छ ।
अध्ययनमा के पनि पाइयो भने, महिनैपिच्छे तीन दिन गरिने सहवासले वैवाहिक जीवनलाई बढी रमाइलो बनाउने रहेछ, दुवै पार्टनरबीच भविष्यमा यौनको विषयलाई लिएर दूरी पनि नबढ्ने रहेछ